चाखलाग्दो: स्थापना, उत्पादन थप्नुहोस्, पैसा कमाउनुहोस्। | Martech Zone
बिहीबार, जुलाई 2, 2015 बुधबार, जुलाई 1, 2015 Douglas Karr
हामी सबै विशिष्ट ईकॉमर्स कन्फिगरेसनको लागि प्रयोग गर्छौं जुन उत्पादन पृष्ठहरूका उत्पादनहरूका टाइलहरू र मानक उत्पाद पृष्ठहरू सहितको फोटोहरू, वर्णनहरू र समीक्षाहरू समावेश गर्दछ। ती पुरातन शपिंग अनुभवहरू सुन्दर शपिंग अनुभवहरूको साथ प्रतिस्थापन भैरहेछ जुन एक ईकमर्स प्रणालीको अर्डर क्षमताहरूको साथ एक सुन्दर सामग्री प्रणालीका सबै सुविधाहरू समावेश गर्दछ।
यो Finesse विषयवस्तु लागि WooCommerce यी शपिंग अनुभवको नयाँ पुस्ताको उत्तम उदाहरण हो।
चाड हो WooCommerce विषयवस्तु बिक्री गर्न बनेको छ। यो भुमिबाट सुन्दर, लचिलो र रूपान्तरणहरूको लागि उत्कृष्ट हुनको लागि बनाइएको छ। यदि तपाईं जहिले पनि आफ्नो उत्पादनहरू तपाईंको तरिकाले बेच्न सक्षम हुन चाहानुहुन्छ, Finesse तपाईंको लागि विषयवस्तु हो!
शप डिजाइनबाट फाइनसे थिमका मुख्य सुविधाहरू
सरल सेटअप - फाइनसे अपलोड गर्नुहोस्, तपाईंको लोगो थप गर्नुहोस् र तपाईंको सामग्री थप्न सुरू गर्नुहोस्।
सामग्री ब्लकहरू - तपाईंको ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न तपाईंको मार्केटि copy प्रतिलिपिको साथ ओभरल्यान्ड थरथरित पृष्ठभूमिहरूको साथ ब्लकहरू थप्नुहोस्। भिडियो प्रयोग गरेर तिनीहरूसँग जडान गर्नुहोस्।
लचिलो विजेटहरु - उत्पादनहरू घुसाउनुहोस् जहाँ तपाईं चाहानुहुन्छ, वा भागहरू छोडनुहोस् जुन तपाईंलाई आवश्यक पर्दैन। तपाईं प्रिसेट लेआउटमा सीमित हुनुहुन्न।
असीमित ल्यान्डि Pages पृष्ठहरू - धेरै ल्यान्डिंग पृष्ठहरू सिर्जना गर्नुहोस् जस्तो तपाईं चाहनुहुन्छ। तपाईंको प्रत्येक कुञ्जी खोज सर्तहरूको लागि विशेष रूपमा पृष्ठ सिर्जना गर्नुहोस्। त्यस तरीकाबाट गुगलका आगन्तुकहरू आफूले खोजेको सामग्रीमा सोझो हुनेछन्।
मोबाइल - सानो र ठूलो स्क्रिन आकारहरूमा उत्कृष्टताका लागि ग्राउन्ड अपबाट डिजाइन गरिएको। यो दुर्लभ विषयवस्तु हो जुन दुबै राम्रोसँग गर्दछ।
रूपान्तरण अनुकूलित - चेकआउटमा नेभिगेसन र विजेटहरू हटाउनुहोस् निश्चित गर्नुहोस् कि प्रयोगकर्ताहरू उनीहरूको खरीद पूरा गर्नु अघि टाढा क्लिक गर्दैनन्।
फास्ट - दुबै खोजी र रूपान्तरण सुधार गर्न द्रुत पृष्ठ लोडि times समयहरूको लागि डिजाइन गरिएको।
तपाईं तल देख्न सक्नुहुन्छ, यो एक अविश्वसनीय विषयवस्तु हो:
खुलासा: हामी यसका सम्बद्ध छौं पसल डिजाइन.
टैग: राम्रोपसल डिजाइनwoocommercewoocommerce थिमहरू
MonsterConnect: तपाइँको बिक्री टीमलाई बन्द गर्न डायल गर्नुहोस्, भुक्तान गर्नुहोस्